Kanal İstanbul Waxaa loo Ogolaaday Warbixinta EIA | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKanal İstanbul Waxaa loo Ogolaaday Warbixinta EIA
Kanal İstanbul Waxaa loo Ogolaaday Warbixinta EIA
17 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Soojeedin xiiso leh oo taallo taariikhi ah oo ku taal Istanbul
Wasiirka Deegaanka iyo Qorshaynta Magaalooyinka Murat Kurum ayaa sheegay inay qiimeyn ku sameeyeen diidmada intii lagu gudajiray howsha EIA ee mashruuca Kanal Istanbul ayna ogolaadeen warbixinta EIA ilaa maantadan la joogo.
Maamulka ayaa ka jawaabay su'aalaha ku saabsan mashruuca Channel Istanbul iyo ajendaha dhismaha Wasaaradda.
Isagoo sheegay in Kanal Istanbul ay tahay mashruuc ay wado Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha gudaha oo ay weheliso Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka, Hay'addu waxay tiri:
Mashruucan ayaa ah in la ilaaliyo oo la badbaadiyo Bosphorus, Bosphorus, oo ah mashruuca qarnigii, halkaas oo hawsha EIA iyo geedi socodka qorshaynta ay fuliso wasaaraddeena isla markaana howlaha dib u dhisku ay fulin doonaan kahor wasaaradda. Waa mashruuca xorriyadda ee Bosphorus-keena. Waa mid ka mid ah mashaariicda ilbaxnimada ee Istanbul. Mashruuca Canal Istanbul gudaheeda, waxaan ku guuleysan doonnaa codsiyada magaalada oo caqli gal ah waxaanan ku hirgalin doonnaa hannaan magaalo oo lagu daydo oo aan dhaafi doonin in ka badan 500 kun oo deggane labada dhinacba, oo muujinaya isu imaatinka tooska ah. Maanta, inta lagu gudajiray howsha EIA, waxaan sameynay qiimeyn, waxaan qiimeynay diidmooyinka waxaana ansaxinay warbixinteena EIA ilaa maanta. Qorshaheenii miisaanka ee 1 / 100.000 waa la hakiyey, waxaan diyaarineynaa 5000 iyo 1000 oo ah qorsheyaashii fulinta ee Zoning. Waxaan rajeynayaa inaan dhammeystiri doonno oo aan ku dhaqan galin doono 4-5 bilood. ”
Kurum Waxaan ku fulin doonnaa Channel-ka Mashruuca Istanbul ee uu hoggaamiyo Madaxweynaheena. Marka 'waxay rabeen', 'meeshan waa kan oo kale' ayuu yidhi. 'Taasi waa sida ay u dhacday' isagu ma dhiibi karo mashruucan. Waxaan ula shaqeynay dadkeenna mashruuc kasta oo aan sameynay illaa iyo hadda, waxaan la shaqeyn doonnaa dadkeenna waxaanan si rasmi ah u sii wadi doonnaa qaabkeenna mashruucan oo quseeya mustaqbalka muwadiniinteenna 82-ka ah ee ku sugan Istanbul. ”
Hay'addu waxay u sheegtay in ay sii wadi doonaan oo ay ku sii wadi doonaan dhammaan mashaariicda ku saabsan caafimaadka iyo mustaqbalka dadweynaha si go'aan leh sida ay ilaa hadda sameeyeen.
İZ GARAN KARINAAN HANUUNAHA LATAHA INA
Isaga oo tixraacaya isbedelka dhul ee Mashruuca Kanal Istanbul, cinwaanada cinwaanku waxay si dhaw ula socdaan nidaamka isbedelka, Bakanna Uma oggolaanayno kirada dhulka ee Mashruuca Kanal Istanbul ama mashruuc kasta. Sida dhammaan mashruucyadeenii hore, uma oggolaanayno kirada dhulka mashruuca Channel Istanbul. Waxaan jeclaan lahaa inaan si cad u sheego in haddii ay xaalad caynkan oo kale ah dhacdo aan la wareegeynno dhacdada
Murat Kurum wuxuu kaloo sheegay inay jiraan su'aalo la xiriira lahaanshaha ajaanibta halkaan wuxuuna yiri, arsa 3dii sano ee la soo dhaafay, dhulka ay joogaan ajaanibta iyo shakhsiyaadka gaarka ah iyo sharciga waa 600 kun mitir murabac. Waa heer aad u hooseeya Mashruuca Canal Istanbul, oo ah 26 hektar, taas oo ah 500 milyan mitir oo laba jibaaran. ”
Maamulka ayaa tilmaamay in mashruucu uu ku andacoonayo in ilaha biyaha, Kheyraadka dabiiciga ah iyo khatarta dhul gariirku ay leeyihiin, isla markaana mashruucu uusan burburin doonin ilaha biyaha mana horseedo qatarta dhulgariirka; warbixin ayaa la diiwaangeliyay.
Maamulka ayaa cadeeyay in tilaabooyinka lagu qaadayo warbixinta EIA ay soo diyaariyeen mid mid, wuxuu yiri:
Ede Mashruuca, Wasaaradda Gaadiidkayadu waxay qaadi doontaa tallaabooyinkan inta lagu gudajiro dhismaha. Sidaa darteed, dhamaadka mashruucan, xarun cusub oo soo jiidasho leh oo loogu talagalay Istanbul ayaa baabi'in doonta halista nolosha iyo badbaadada hantida muwaadiniinteenna ku nool Bosphorus, waxaana tusaale u ah magaalo-dhismeedka, qaab dhismeedka qaab dhismeedka salka ku haya, kaas oo guryaha lagu soo saaro dhulgariirka, aagagga R&D, qaran. jardiinooyinka, jidadka bey'adda, meelaha uu muwaaddinka ku noolaan karo 7 maalmood 24 saac, dekedaha iyo marinas. Waxaan halkan ka go'an iyo mashruucan deegaankeena sida aynu tallaabo kasta oo doonayo inuu sameeyo marka faraska, waxaan qaataan taxaddar kasta in la ilaaliyo dabeecadda, İstanbul'umuzda oo dhan aan hubin in tahay, noo Turkey oo dhan, taas oo, sida in mashruuc kasta oo aan samayn hore. "
CODSIGII UGU DAMBEEYSA EE 100 SANAD OO GURYAHA BULSHADA LAGA HELI KARO ISTANBUL
Isaga oo ka jawaabaya su’aasha ku saabsan tirooyinka dalabka ee ku saabsan 100 kun ee mashruuc guryeynta bulshada ah, ayay Hay’addu tidhi, “Waxaa jiray 100 milyan 1 kun oo dalabyo ah 209 kun oo ah mashruucyada gurisiinta bulshada. Saddexda bilood ee ugu horeysa 100 guryaheena bulsheed, waxaan dhameystiri doonnaa mashruucyada waxaanna ku bilaabeynaa dhismaha nidaamka qandaraaska, waxaana rajeyneynaa inaan ku dhisi doono oo u gaarsiin doono dhammaan 3 guryaheena bulsheed muddo hal sano iyo badh ah.
Hay'addu waxay soo saartay bayaan ku saabsan gobollada codsiyada 100 guri bulsho waxayna tidhi, ler Gobollada tirada ugu badan ee dalabyada ah waxay ahaayeen 375 kun oo dalabyo ah oo ka dhacay Istanbul, 75 kun oo dalabyo ah oo ku yaal Izmir iyo 56 kun oo dalabyo ah oo ka dhacay Bursa, tirada codsiyada ee gobollada kale ayaa aad uga sarreeya kootada. . Sidaa darteed, waxaan rajeynayaa inaan sii wadidoono mashruuceena isla go'aankeena isla sanadka 2021. Waxaan u fulin doonnaa mashruucan dhammaan dadka dakhligoodu hooseeyo ee kooxda noqon doona marti-gelin. Waxaan rajeynayaa in dalkan wadankan lagu tagi doono iyada oo muwaadiniintu ay fulin doonaan mashruucan.
Waa hagaag MALAHAN MALNA UU KA DHACDO CADAADADAADA ”
Hay'addu waxay ku nuuxnuuxsatay inay dhisi doonaan guryo adag, badbaado leh kana hortaga khatarta masiibada ee mashruucan, Hay'addu waxay tiri, “Waqtigan xaadirka ah, annaga oo hogaaminaya Madaxweynahayaga, waxaan qaadaynaa talaabooyin badan oo laga qaadayo jardiinooyinka qaranka, guryaha bulshada iyo isbadalka magaalooyinka. Waqti uma lihin inaan ku khasaarinno arrimo la halmaala. Waxaa naga go'an inaan si kalsooni leh ugu dhaqaaqno bartilmaameedkeenna 2023
Muwaadiniintu waxay dhahaan 'Ya Kanal Or Istanbul' to Kanal Istanbul Report EIA
Oggolaanshaha Warbixinta Sanadlaha ah ee Degmada Boosaaso ee 2018
Ansixinta wareejinta Wadaagga ee Madaarka Istanbul
Wasaaradda ayaa si adag ugu jawaabtay warbixinta TEMA
Waxaan ka dambeyneynaa Yurubta gaadiidka tareenka, sida lagu sheegay Warbixinta Runta ee Gaadiidka
Guud ahaan wadaxaajoodka 4 wuxuu ka yimid Trabzon iyo Bayburt ilaa warbixinta tareenka
Go'aanka Mastaradda Kireeyaha ee Lagu Joojiyo Dhibicda Warbixinta EIA
Khasaaraha TCDD Marka loo eego Warbixinta TCA
Marka loo eego Warbixinta Maxkamadda ee Xisaabaadka, Mashruuca Şanlıurfa Trambus wuxuu kasoo horjeedaa Sharciga
Guddiga Degmadda ee Gobolka Alanya oo la Oggolaaday
Mashruuca taraamka ayaa waxaa ogolaaday guddiga.
Ogolaansho ka timid Wasaaradda Mashruuca Virgin Mary Cable Car
Ogolaanshaha mashruuca Sivasta Ropeway
Xaqiijinta Mashruuca Tünektepe ee Golaha
Ansixinta Garoonka diyaaradaha
Canal Istanbul wuxuu u shaqeeyaa
Ansixinta Warbixinta Channel Istanbul EIA Report
Sida Qandaraaska Channel-ka Istanbul uu noqon doono
Saldhiga Channel Istanbul
Mashruuca Kanal ee Istanbul